साँचो हराएको एउटा दराजः जुन ८२ वर्षदेखि बन्द छ ! | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← स्याङ्जाकी भूमिका गुरुङ मिस हङकङ नेपाल २०१६
खेतबारी चाहिदैंन, भित्तामा खेती गर्ने प्रविधिको विकास (फोटोफिचर) →
६ असोज, काठमाडौं । लण्डनमा एउटा यस्तो दराज छ, जुन कम्तिमा ८० वर्षदेखि कसैले खोलेको छैन । जसलाई फोर्ने हिम्मत कहिलेसम्म कसैले गरेन । र, यो एउटा यस्तो दराज हो, जसलाई खोल्न नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यो दराज चानचुने होइन । लण्डनस्थित नेपाली दूतावास रहेको कम्तिमा १५० वर्ष पुरानो भवनको बेसमेन्टमा रहेको दराजको कुरा हो यो । दराज पनि काठको होइन, फलाम वा त्यस्तै कुनै बलियो धातुको हुनुपर्छ ।
नेपाली दूतावास स्थापनाकालदेखि नै यही भवनमा रहँदै आएको छ । सन् १९६५ मा लण्डनका ठूला ब्यापारी तथा सांसद सामुयल मोर्ट पेटोका लागि बनाइएको यो भवन सन् १९३७ मा बेलायत सरकारले नेपाललाई उपहार दिएको थियो ।
यो दराजका ’boutमा प्रायः सबै तत्कालीन राजदूतहरुलाई जानकारी भएर पनि कसैले खोल्न भने सकेनन् । एकपटक प्रवल समशेर जबरा राजदूत भएका बेला सन् २००६ तिर फुटाउन खोज्दा ठूलो पैसा खर्च हुने देखिएपछि रोकिएको दूतावासका कर्मचारीहरुले बताए ।
लण्डन दूतावासमा पुग्ने सबै राजदूतहरुले यस’bout चासो राख्छन् तर खुलाउनका लागि मन्त्रालयबाट निर्णय भने गराएका छैनन् । ‘कुनै बहुमूल्य सामान भए उहिल्यै फोरि सक्थे, केही नभएर चासो नदिएका होलान्’ दूतावास स्रोतले भन्यो ।
बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा बीसौं राजदूतका रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दुर्गाबहादुर क्षेत्री लण्डन जाँदैछन् । उनको पालामा भूत बसेको भनिएको दराज र कोठा फोर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउँछन् कि पठाउँदैनन् ? मन्त्रालयले निर्णय गरेमात्र यो रहस्यको भाँडो फुट्नेछ ।(onlinekhabar )